Farmaajo oo bogaadiyay guusha laga gaaray wejiga hore ee Doorashada Baarlamaanka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Farmaajo oo bogaadiyay guusha laga gaaray wejiga hore ee Doorashada Baarlamaanka
Farmaajo oo bogaadiyay guusha laga gaaray wejiga hore ee Doorashada Baarlamaanka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hambalyeeyay guusha dhammeystirka Doorashada Senatorada Aqalka Sare ee Baarlamaanka ayaa ku bogaadiyay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadaalka uu ku bixiyay dardargelinta doorashada.
Madaxweynaha ayaa xusay sida xilkasnimada ah ee Madaxda Dowlad Goboleedyada dalku ay u guteen waajibaadka Qaranka ee ka saarnayd soo gudbinta musharaxiinta Sanatarrada Aqalka Sare, waxa uuna ku ammaanay Guddoonka iyo Xildhibaannada Baarlamaannada heer Dowlad-Goboleed gudashada masuuliyadda kaga aadanayd doorashada Sanatarrada Aqalka Sare.
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa bogaadiyey Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad-Goboleed, Xallinta Khilaafaadka, Guddiga Amniga Doorashooyinka iyo Ciidanka Soomaaliyeed ee ka shaqeeyey sugidda ammaanka goobaha doorashada Aqalka Sare, isaga oo tilmaamay kartida iyo aqoonta dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin qabashada doorasho ka turjumeysa hor u socodka dalkeenna.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyey dhammaan 54-ta Sanatar ee loo doortay Aqalka Sare, waxa uuna Alle uga baryey in uu u fududeeyo gudashada Waajibaadka Qaran ee loo doortay, uuna waafajiyo go’aan kasta oo ku saleysan horumarinta dalka, dadka iyo danaha Soomaaliyeed.
Previous articleQorshaha Mareykanka uga yaal, haddii xaaladda Itoobiya ka sii darto
Next articleDib-qalooc 453 qof ku qaniinay dalka Masar, 3 qof ayaa u dhimatay